Faallo: Maxay hogaamiyaasha Africa ay ka baran karaan nabad ku kala wareegidda xilka madaxwaynaha | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Faallo: Maxay hogaamiyaasha Africa ay ka baran karaan nabad ku kala wareegidda...
Faallo: Maxay hogaamiyaasha Africa ay ka baran karaan nabad ku kala wareegidda xilka madaxwaynaha
Wax Yar ka dib nabad ku kala wareegidii Awooda Trump iyo Obama ee dalka Maraykanka, qalalaasaha dalka Gambia ayaa la xaliyay ayadoo aan dhicin Hal Rasaas. Madaxwaynahii xilka looga guulayatay Yahya Jammeh ayaa ka soo muuqday Tv-ga Qaranka waxaana uu shaaciyay go’aabkiisa ahaa in si nabad ah xilka uga Dego.
Go’aanka Yahya Jammeh, ee xilka uga degay ma ahayn oo Kali ah mid muhiim u ah dadkiisa, maadaama uu go’aansaday in uusan horseedin dhiig ku daata dalka isaguna xilka sii haysto,hase ahaatee waxaa ay muhiim u tahay guud ahaan Africa ka dib muddo badan uu kaligii taliye ka ahaa Gambia haddana xilka si nabad ah ku wareejiyay.
Ka hor tagii Qalalaasaha.
Qalalaasihii siyaasadeed ee dalka Gambia waa mid qorayaashu ay ku micneeyeen mid ka dhalatay guuldaro doorashooyo oo ay adag tahay inuu aqbalo qof kaligiis maamulayay muddo dheer.
Jammeh, ayaa xukunka afgambi ku qabsaday sanadkii 1994, waxaana uu xilka hayay 22 sano, isagoo dhowr jeer dib loo soo doortay taasi oo lagu micneeyay doorasho aan Xur iyo xalaal ahayn.
Koowdii Dec. 2016 kii mucaaradka Jammeh, Adama Barrow ayaa ku guulayatay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday, isagoo 4% ka horreeyay Mr Jammeh.
Qalalaasaha ayaa bilowday markii Yahya uu 9 Dec. Shaaciyay in doorashada looga shubtay.
Waxyaabaha ku qasbay inuu dhawaaqaasi bixiyo waa arrimo siyaasadeed oo uu ku doonayay marmarsiiyo uu ku helay magan-galyo siyaasadeed. mucaaradka waxaa ay bilaabeen inay ka hadlaan ka bixitaankii Gambia ee maxkamadda dambiyada dagaalka Addunka ICC, taasi oo lagu sheegay maskax siyaasadeed uu Jammeh la dheelay Caalamka, isagoo ka fogaanayay in loo qabsado dambiyada dalkaasi uu ka galay.
Jammeh ayaa dalka ku soo rogay xaalad deg deg ahayd baarlamaanka waxaa ay siyeen 3 bilood oo dheeraad ah uu xafiiska kusii nagaado ka dib markii looga guulayatay doorashadii guud ee dalkaasi.
Urur gobaleedka economic community of West African states (ECOWAS) ayaa u kacay arrinta Gambia, ayadoo shir ku qabsaday Magaalada Abuja Nigeria waxaana ay iska saareen madaxwaynayaal ay ka mid tahay gabadha ku guulayatay abaal marinta nopel-ka ahna Madaxwaynaha dalka Liberia.
Arrinta diblumaasiyadeed ee ugu waynayd waxaa ay ahayd sidii xukunka si nabad ah loogu kala wareegi lahaa.
Arrinta diblumaasiyadeed ee Gambia waxaa door Wayn la ciyaaray Atoorayaal Caalami ah sida QM iyo Midowga Yurub, kuwaasi oo Mr Jammeh ku wargaliyay in Natiijo adag uu la kulmi doono.
Natiijada wanaagsan ee qalalaasaha dalka Gambia waxaa keenay sidoo kale in arrinta aan lagu soo koobin diblumaasiyad oo Kali ah oo 7 kun oo ciidamo maliteri ah la dhigay gees ka gees min bad ilaa iyo Bari.
Dalkan yer oo ku dhex yaala dalka Senigal ayaa hogaankiisa loo qabtay in xilka baneeyo 19 bishan Janaayo hadii kale awood xilka looga qaadi doono.
Isla 19 ka Magaalada Dhaka ee Senegal, waxaa lagu dhaariyay Madaxwaynaha la doortay ee Gambia Adama Barrow, taasi oo ahayd guuldaro labaad oo soo gaartay Yahya Jammeh.
Maalmo kooban oo laga fogaanayay in xukunka dhiig lagu kala wareego madaxwayne Jammeh ayaa dalka ka dhoofay isagoo ay la socdaan ku xigeenkiisa iyo xubno kale.
Casharada ay ka baran karaan kaligood taliyaasha Africa.
Waa farriin Cad oo ku wajahan hogaamiyaasha Africa ee xilka isku dhajiya.
Mucaaradka dalka Africa waxaa ay u baahan yihiin in ay u midoobn hogaan walba oo adag.
Hagaamiye kasta oo ay ku jirto xogaa wadaniyad ah waa inuu maraa wadadan uu maray Jammeh inkastoo si ka wanaagsan ay xilka uga dagi karaan.
Qoraalkan isagoo English ah waxaa qoray—- Solomon Ayele Dersso,— waxaa turjumay Maxamed Dhaaysane Macalin. Xaqiiqa times
Previous articleBeesha Caalamka oo ku baaqday in lagu dhaqsado doorashada Madaxwaynaha
Next articleGuddiga Doorashada Madaxwaynaha oo lagu dhawaaqayo iyo Shuruudaha guddiga oo la soo saaray